Ihe ọiceụ Juụ ọ bara uru afanyekwa? | Martech Zone
Ihe ọiceụ Juụ ọ bara uru afanyekwa?
Thursday, July 30, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Chris Lucas
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere Horizon Realty na-eme nyocha ngwa ngwa na Google ma ị ga-ahụ isiokwu ole na ole na-adọrọ mmasị, dịka nke a Mashable. Maka ngwa ngwa, onye bụbu onye nwe ụlọ ha, Amanda Bonnen, zipụrụ tweet banyere bi na ebu n’otu n’ime ha. Horizon gbara akwụkwọ a gbaa akwụkwọ maka $ 50,000 megide Ms Bonnen. Ugbu a eziokwu ndị ọzọ na-abịa n'ìhè, ma enwere nkuzi ka ukwuu a ga-amụta ebe a ma ọ bụghị naanị na Social Media nwere ike ịbịaghachi ịta gị.
Ihe ọmụmụ 1: Mara onye nwere ike
Mgbe ị banyere n'okirikiri ejighi n'aka, ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta, ndị na-ede blọgụ, ma ọ bụ mgbasa ozi ọdịnala, ọ dị oke mkpa ịghọta onye nwere ike. Taa ngbanwe ike na-apụta ìhè ma ọ bụghị mmadụ niile na-enweta ya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na tupu ị lụọ ọgụ ọ bụla n'ihu ọha, ma ị chere na ị ziri ezi, ị ga-aghọta etu ihe omume ahụ nwere ike isi pụta. O yikarịrị, n'agbanyeghị ihe ị chere, ị naghị ejide kaadị niile.
Ihe mmuta nke abuo: Ewetala mma na egbe
Gbaa mbọ hụ na ọ bụrụ na ị ga - ewepụta otu isiokwu metụtara soshal midia, ị ghọtara usoro mmekọrịta. Gbaa mbọ hụ na ị dị njikere iji usoro a na-ekwu maka uru gị. Ma ọ bụghị ya, mgbe ị dọtara mma ahụ na onye na-emegide gị, ọ dị adị ma ọ bụ na ọ pụtaghị, na-ewepụta egbe ị ga-abụ ọbọgwụ ọdụ.
Dị ka Mashable post si tinye ya nke ọma:
Anyị ji n'aka na Horizon Realty furu efu ihe karịrị $ 50,000 site na ntugharị Twitter a. Nke ahụ bụ ihe ị ga - enweta mgbe ị na - ekwu okwu dị ka? Anyị ga-ebu ụzọ gbaa akwụkwọ, jụọ ajụjụ ma emesịa otu nzukọ.?
Ihe ọmụmụ nke 3: Nweta ezigbo ndụmọdụ
Anaghị m ekwu banyere ya ndụmọdụ gbasara iwu. Ọ dị mkpa karịa n'oge a na ị nwere onye ị nwere ike ịgakwuru ịjụ, "gịnị ka m kwesịrị ịma". Maka nnukwu ụlọ ọrụ ọ dị mkpa na ị nwere ahịa na ndị otu PR na tebụl. Maka obere òtù ọ nwere ike ịbụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, onye ọlụlụ, maọbụ ọbụlagodi oge ezumike gị. Onye ọ bụla ọ bụ, jide n'aka na ị nwetara ezi nghọta maka ihe nwere ike ime, otu ị ga-esi meghachi omume, yana kedu ihe ga-esi na ya pụta.
Nkwurịta okwu na-agbanwe. Kedu ihe nwere ike ịbụ obere akụkọ mpaghara afọ ole na ole gara aga nwere ike bụrụ nri mba taa. Gbalia ihu na inwere nghota zuru oke banyere ihe uzo a di tupu iwere agha nke ndi mmadu.
Chris bu onye osote onye isi oche nke Business Development maka Mpempe akwụkwọ. Ọ na-ejikwa ọtụtụ mbọ azụmaahịa Formstack nwere mmasị pụrụ iche n'ịchọpụta etu mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịntanetị nwere ike isi nyere Formstack aka itolite. Formstack bụ ngwa na-ewu ụlọ n'ịntanetị nke na-ewe ọtụtụ isi ọwụwa site na ịnakọta na ijikwa data n'ịntanetị.
Inye Uru na Social Media na njem nleta
World Analytics na-agbapụ na Webtrends
Jul 30, 2009 na 1:28 PM
Ihe omuma atu ozo nke mgbanwe a bu ndi United Airlines na-egbu onye oti egwu Dave Carroll mgbe o mebisiri egwu Taylor di oke onu. Vidio ya, "United Breaks Guitars" ozugbo malitere ịrịa na - ebe $ 180M na United uru nwere ike ịba ụba - na-efu United ụfọdụ akara aka maka ụfọdụ.